Saddex ka mid ah kooxaha waa weyn ee Premier League oo ku tartamaya saxiixa xiddiga Real Madrid ee Martin Odegaard – Gool FM
(England) 03 Okt 2019. Ciyaaryahan Martin Odegaard ayaa bandhigiisa uu noqday mid aad u heer sarreeya taasoo keentay inay saxiixiisa ku tartamaan saddex ka mid ah kooxaha waa weyn eek a dheela horyaalka Ingiriiska ee Premier League.
Manchester United ayaa la soo warinayaa inay indhaha la raacayso da’yarka kooxda Real Madrid ee Martin Odegaard kaasoo ay u arkaan saxiixooda mustaqbalka fog ee Old Trafford.
Kaddib markii uu da’yarkan si cajiib ah ku bilowday waqtigiisa amaahda ah ee uu kula joogo koxoda Real Sociedad, 20-sano jirkan ayaa la la xiriiriyay ku laabashada garoonka Bernabeu, iyadoo sidoo kale ay xiiseynayaan kooxo badan oo ka dheela horyaalka Premier League.
Manchester City, Arsenal iyo Wolverhampton Wanderers ayaa ka mid ah kooxaha reer England ee xiisaha u ahaya xiddigan xulka qaranka Norway.
Yeelkeede, Wargeyska The Sun ayaa warinaya in Man United ay sidoo kale diiradda ku hayso inay kubbad sameeyahan keento garoonka Old Trafford, iyadoo macallin Ole Gunnar Solskjaer uu eegayo inuu da’yar kale ku soo darsado shaxdiisa kooxda koowaad.
Dhinaca kale tababaraha kooxda Real Madrid ee Zinedine Zidane ayaa horay horshihiisa ugu darsaday Odegaard waxaana uu doonayaa inuu ku darsado shaxdiisa Los Blancos xilli ciyaareedka soo socda, isagoo raba inuu dib uga soo celiyo amaahda uu ku maqan yahay, inkastoo ay Real Madrid maankeeda bedeli karto haddii lacag kaash ah loo sheego, markaasoo lacagta ay ku hesho laacibkan ay u adeegsan doonto bartilmaameedyo kale.